M/weyne Faroole oo maanta furay kalfadhigii 26-aad ee baarlamaanka Puntland, una jeediyey khudbad la xiriirta xaaladda dalka iyo socdaalladiisii dibadda. – Radio Daljir
Garowe, June 17- M/weynaha dawladda Puntland ayaa maanta ka qayb-galay furayna Kalfadhigii 26-aad ee mudanayaasha golaha wakiilalada Puntland, una jeediyey khudbad uu ku soo bandhigayey socdaalladiisii dibadda iyo xaaladda guud ee dalka.
M/weyne Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole, ayaa xildhibaannada baarlamaanka waxaa uu sharraxaad dheer ka siiyey safarradii ugu dambeeyey oo uu ku tagay dalalka, Yugaandha, Kenya, Ethoipia iyo Jabbuuti kuwaasi oo qaar uu uga qayb-galay shirar muhiim ah oo quseeyey arrimaha Soomaaliya gaar ahaanna shirkii looga arriminayey aayaha dawladda FKMG ah ee Soomaaliya.
M/weynuhu waxaa uu sheegay shirarkaasi in ay horgeeyeen qorashayaal micno iyo miisaan durugsan ku ku fadhiya, kana turjumaya ahdaafta iyo mabaadida siyaasadeed ee dawladda Puntland iyo shacabkeeda kuwaasi oo la saan-qaadayey sida m/weynuhu carrabbaabay sixidda siyaasadaha qalloocan ee waddanka hareeyey.
Dhinaca kale m/weynuhu waxaa kale oo uu ka hadlay arrimaha kala duwan ee Puntland isagoo si gaar ah ugu dheeraaday amniga waxaana uu mid mid uga hadlay xaaladaha amni ee jira inta badan gobollada iyo degmooyinka Puntland. M/weyne Faroole waxaa uu amniga Puntland ku tilmaamay mid deggan wax bandanna ay dawladdiisu ka qabatay isagoo falalka amniga darro ee jirana ku eedeeyey in ay hurinayaan siyaasaddo bannaanka ah oo dux iyo dabac soo dhaweyneed ka haysta dad gudaha jooga.
Guddoomiyaha golaha baarlamaanka Puntland mudane Cabdiraxshiid Maxamed Xirsi ayaa isna m/weynaha uga war-bixiyey tallaabooyinkii ay qaadeen intii u dhaxaysay labada kalfadhi, waxaana uu qodob-qodob u iftiimiyey hawlihii wax-qabad ee mudanayaasha.
Dhinaca kale intii uusan furmin maanta kalfadhiga golaha wakiillada Puntland m/weynuhu waxaa uu xarigga ka jaray xafiisyo cusub oo lagu kordhiyey xarunta baarlamaanka Puntland kuwaasi oo loogu talo galay in lagu kala fududeeyo hawlaha mudanayaasha.
Kalfadhigaan oo ahaa midkii 26-aad ee mudanayaasha golaha wakiillada Puntland ay yeeshaan ayaa ku soo aaday xilli aad xasaasi u ah ayna murugsan yihiin siyaasadaha guud ee Soomaaliya, lagana sugayey dawladda Puntland ay ka ciyaarto dawr muhiim ah, waxaana wali m/weynuhu uusan caddayn mawqif dawladda Puntland ee diidmada ama ogalaansha nuxurkii ka soo baxay shirkii Kampla.